छवि–शिल्पा सम्बन्धः समझदारी नहुने बिन्दुमा ! पक्राउ पुर्जी जारी
चलचित्र क्षेत्रमा व्यक्तिगत सम्बन्ध र विवाद सार्वजनिक हुनु नौलो विषय होइन । कति जानाजान (आफूलाई चर्चामा ल्याउन) विवादमा मुछिन्छन् त कति अन्जानवस । यिनैमध्येका एक पात्र हुन्, निर्माता छवि ओझा । उनी विवादमा मुछिनुको कारण हो नायिकासँगको सम्बन्ध । पछिल्लो...
बन्याे ‘एभेन्जर्सः इन्डगेम’ विश्व इतिहासमै सबैभन्दा बढी कमाइ गर्ने चलचित्र
अध्ययन–अनुसन्धानको कसीमा नेपाली लोकगीत
यमबहादुर दुरा, श्रावण ३, २०७६
झापा । झापाको कचनकबल गाउँपालिकाले गायक प्रमोद खरेललाई सद्भावना दूत नियुक्त गरेको छ । नेपालको सबैभन्दा होचो स्थानमा रहेको सो गाउँपालिकाले पर्यटकीय प्रवद्र्धनमा सघाउ पुग्ने अपेक्षा गर्दै सोही ठाउँमा जन्मेका गायक खरेललाई चौथो गाउँसभाबाट सद्भावना दूत नियुक्त गरेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष...
सुपर ३० को पहिलो दिनको कमाइ ११ करोड
काठमाडौ, एजेन्सी । शुक्रवार को रिलीज भएको ऋतिक रोशन अभिनित फिल्म सुपर ३० ले पहिलो दिन ११.८३ करोड कमाई गरेको छ । पहिलो दिनको तुलनामा दोस्रो दिन फिल्मले झण्डै ७ करोड धेरै अर्थात १८ करोड़ कमाई गरेको छ । दुबै...
लोकगीतमा ‘तेरो र मेरो’देखि आर्थिक दोहनसम्म
यमबहादुर दुरा, असार २७, २०७६
लोकगीत के हो ? यो प्रश्नको सीधा र सरल जवाफ हो, लोकगीत जनताको गीत हो । लोकगीतको सर्जक पनि जनता नै हुन्, प्रयोक्ता पनि जनता नै हुन् । लोकगीत सार्वजनिक सम्पत्ति भएकाले भएकाले त्यसलाई चाहेको बेलामा जसले पनि प्रयोग गर्न...
कबीर सिंह पछि शाहिद कपूरले बढाए फीस
फिल्म कबीर सिंहको अपार सफलता पछि शाहिद कपूरले आफ्नो फीस बढाएका छन् । मुंबई मिररका अनुसार शाहिदले अब एउटा फिल्म खेलेवापत करीब ३५ करोड़ लिने मनस्थिति बनाएका छन् । हाल उनले एउटा फिल्मका लागि १० देखि १५ करोड लिने गरेका...
‘राष्ट्रिय चलचित्र पुरस्कार तथा दीर्घसाधना सम्मान’ समारोह असार २७ मा
काठमाडौँ । चलचित्र विकास बोर्डले आफ्नो १९औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा असार २७ गते राष्ट्रिय चलचित्र पुरस्कार तथा दीर्घसाधना सम्मान समारोह आयोजना गर्ने भएको छ । दुई वर्षपछि हुन लागेको उक्त कार्यक्रम यसपटक राष्ट्रपति भवन शितल निवासमा गरिने भएको छ । पुरस्कार...
असार २१ मा तारा देवी र अरुणा लामाका गीत गुञ्जदै
कास्की । टेस्ट अफ हार्मोनीःधुनहरूमा तारादेवी र अरुणा लामा कार्यक्रमको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । पोखरेली सुगम सङ्गीत गायिकाको संस्था हार्मोनी:द मोर्डन सङ्गस्ट्रेसेस अफ पोखरा ले २०७६ असरा २१ शनिबार पोखराको सभागृहमा गरिने विशेष साङ्गीतिक कार्यक्रमको तयारी सकिएको जानकारी...
कबीर सिंहले कमायो २०० करोड
काठमाडौं, एजेन्सी । शाहिद कपूर तथा कियारा आडवाणीको फिल्मले घरेलु बक्स अफिसमा आफ्नो प्रदर्शनले सबैलाई चकित बनाएको छ । २०१९ मा उरी द सर्जिकल स्ट्राइक पछि कबीर सिंहले बक्स अफिसमा कमाल गरेको हो जसको खासै अपेक्षा गरिएको थिएन् । शाहिद...
जायरा वसीमलाई मुम्बईको प्रतिउत्तर
लोकसंवाद संवाददाता, असार १७, २०७६
तिमी जादैछौ जाऊ । प्लिज जाऊ । जहाँ जान चाहन्छौ जाऊ । जे गर्न चाहान्छौ गर । जहाँ गए पनि जहाँ रहे पनि खुसी होऊ । अल्लाहले तिमीलाई धेरै नै तरक्की दिउन् । यस्तो सही बाटोमा हिँडाउन, जुन बाटो सोझै...
नारायण रायमाझीः मौलिक लोकभाका र भावुकताको दोभान
यमबहादुर दुरा, असार १३, २०७६
पाल्पाको विकट गाउँ । मगर समुदायको बाहुल्य भएको बस्ती । चाडपर्वमा रातभरि रामरसी चल्थ्यो । गाउँमा मादल घन्कन्थ्यो । गाउँमा गुञ्जिएको लोकभाकाले मन लोभ्याउँथ्यो । गीतमा चुम्बकीय आकर्षण हुन्थ्यो । त्यहाँको बृहत् साङ्गीतिक माहोलले कसैको जीवनमा कमलकोटीको भूमिका खेल्यो ।...
आलियाले लन्च गरिन यूट्यूब च्यानल
काठमाडौं, एजेन्सी । ट्वीटर तथा इंस्टाग्राममा सक्रिय रहेकी आलियाले जुन २६ बुधवारका दिन आफ्नो पहिलो यूट्यूब च्यानल aliabe लन्च गरिन् । पहिलो दिन नै उनको च्यानललाई ८७ हजार भन्दा धेरै मानिसले सब्सक्राइब गरेका थिए । तथा २ भन्दा धेरैले लाइक...
‘१४ वर्षको उमेरमा पहिलो एल्बम निकालेँ’
सुरत रावत डोटेली कान्छा बुबा २०५२ सालतिर लेवनानस्थित शान्तिसेनामा खटिनुभएको थियो । त्यतिबेला शान्ति सेनामा एक गीत निकै चर्चित भएको थियो बाचे भने तीन लाख मरे सात लाख पाइने... बुबा पनि लोकसंगीतमा रुचि राख्नुहुन्थ्यो । उहाँ लोकदेउडा र ठाडी भाका...
हलिउड अभिनेत्री मर्लिनको मूर्ति गायब
काठमाडौं। एजेन्सी । हलिउडकी प्रख्यात अभिनेत्री मर्लिन मुनरोको मूर्ति पब्लिक आर्ट स्पेसबाट हराएको छ । लसएन्जल्सका प्रहरीले मुनरोको हराएको मूर्तिको खोजी कार्य शुरु गरेको छ । उनको मूर्ति पेन्टेड स्टेनलेस स्टीलसँगै एल्यूमिनियमको प्रयोग गरेर बनाइएको थियो । लसएन्जल्सका काउन्सिलमेन मिच...
यु ट्युबः पुराना भाकाहरूको पुनरागमन
यमबहादुर दुरा, असार ६, २०७६
पुराना पात झर्छन् नयाँ पात पलाउँछन् । पुराना जान्छन्, नयाँ आउँछन्, जुन दुनियाँको सर्वजनीन तथा सर्वविदित रीत हो । तर, यो शाश्वत रीत सधैँ सही नहुने रहेछ । यु ट्युब मा धमाधम अपलोड भइरहेका पुराना नेपाली लोकगीत देख्दा यस्तै लाग्छ...
लक्ष्मी न्यौपाने: भजनकीर्तनदेखि लोकगीतको शिखर आरोहणसम्म
यमबहादुर दुरा, जेठ ३१, २०७६
एकजना धर्मात्मा अभिभावक आफ्नी छोरी बिरामी भएकाले बेचैन थिए । छोरी च्यापेर अस्पताल ओहोरदोहोर गरिरहँदा उनले प्रतीक्षा गरे, छोरी निको भए घरनजिक सरस्वतीको मन्दिर बनाउँछु । नभन्दै भगवानले पुकारा सुनेजस्तै भयो । छोरी निको भइन् । उनले आफ्नो प्रतीज्ञा अनुसार...